Andraikitra ara-asa - Thread MH - Ningbo MH Thread Co., Ltd.
MH dia nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny Oeko-Tex®Standard100 ary nomem-boninahitra ho ny "Top 500 China Service Industry" sy ny "AAA Trustworthy Company".
Mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana
Miaraka amin'ny fitomboan'i Shina sy ny toekarena manerantany dia miharatsy ihany koa ny tontolo voajanahary. Indrindra koa ny loto sy ny rano ary ny fandotoana ny ranomasina. MH mandray ny andraikiny hiaro ny tontolo iainana voajanahary.
Tao amin'ny 2015, nanangana "fonja maitso" ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ny MH, miantso ny mpiasa Mh hiaro ny tontolo iainana voajanahary ary mampihatra ny foto-kevitra "maitso maitso" amin'ny asa atao any ivelany.
Amin'ny maha-orinasam-barotra fanta-daza azy, MH dia efa nahavita ny famokarana maitso nandritra ny taona 16, ary nanolo-tena tamin'ny fanaovana fikarohana momba ny fampihenana ny famokarana entona fandotoana, nampiasaina hananganana laboratoara fitsaboana rano, manamarina ny fisotroan-drononon'ny orinasa sy ny soatoavina rehetra mifanaraka amin'ny fenitra ara-tontolo iainana . Tao amin'ny 2015 MH ihany koa dia nanamboatra ny doko-doko, polycycles recycled, céstique modifiés polyester, ary Better- Cotton-Initiative siramamy ranon-javamaniry voajanahary, manomboka amin'ny fitaovam-pitaovana mba hampiharana ny famokarana maitso.
Ny asa soa sy ny asa fanompoana ho an'ny daholobe
Ny MH dia nanangana ny Tahirim-Bola "Xiao dou ya" mba hanampiana ireo ankizy any amin'ny tanàna mahantra hamita ny fianarany. Ny MH dia nanan-janaka 7 mahantra nandritra ny folo taona.
Isaky ny fahavaratra, mpirotsaka an-tsitrapo Mh dia handefa fanomezam-pahasoavana ho an'ny mpiasa sy ny polisy misahana ny fifamoivoizana. MH dia manohana ny "fiakaran'ny akanjo" ary nomena ny fitafiana 10,000pcs mankany amin'ny tanàna mahantra ao Guizhou, Yunnan ary ireo faritra hafa mahantra.
Isan-taona, ireo mpirotsaka an-tsitrapo MH dia hitsidika ny ankizy ao amin'ny Institiota'ny fiantohana fiantohana Ningbo Enmeier, milalao miaraka amin'ny ankizy, ary manome fanomezana ho azy ireo.
MH Ny lanjan'ny MH: ny fifantohan'ny mpanjifa, ny asa aman-draharaha, ny fanavaozana, ny fijaliana, ny fahamendrehana
MH dia nanangana gazety elektronika "MH Weekly", MH APP sy sehatra fifampiresahana hafa mba hampiely ny kolontsaina Mh.
Ny MH dia manana volavolan-dalàna manokana hanohanana ny hetsika ara-kolotsaina, toy ny fety isan-taona, ny asa fananganana trano, ny fizahan-taratra ny mpiasa, sns. Mh koa dia manana club basketball, klioban'ny baolina kitra, klioban'ny mpizahatany, fikambanana sary ary hafa, klioba valo, maimaim-poana ho an'ny MH ny mpiasa mba hanana fahasalamana ara-pahasalamana.
Mikarakara ny fahasalaman'ny mpiasa
Manana tahiry manokana ho an'ny fahasalamana ny MH. Ny MH dia mandinika fijery isan-taona amin'ny mpiasa rehetra ao amin'ny MH, mikarakara lahateny momba ny fahasalamana, ny fomba fisainana mahasalama sy ny fahalalana momba ny fahasalamana. Ankoatr'izay, nanangana ny volavolam-pifandraisana "Firefly" ny MHH, hanampy ny mpiasa mh manana aretina lehibe na voina voajanahary. Ny fanampian'ny "Firefly" dia nanampy olona mihoatra ny folo tao anatin'ny taona 2.